Ny Valosoa Vaovao, 29 Desambra 2018. | Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← Mbs Vaovao, 28 Desambra 2018.
Mbs Vaovao, Kianjan’ny 13 Mai 2018. « Vérité des urnes », Lanzelo. →
HCC: mizotra amin’ny fanafoanana ny voka-pifidianana
Namoaka ny voka-pifidianana vonjimaika ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena misahana ny Fifidianana (CENI) ny Alakamisy 27 Desambra 2018. Ny zava-nisy dia tsy natao hatramin’ny farany ny fampitahana ireo vokatra amin’ny alàlan’ny fitanana an-tsoratra (PV) sy ny biletà tokana (bulletin unique original) orizinaly ary ny lisitry ny mpifidy satria noroahina teny amin’ny CENI ireo nanao izany avy amin’ny K25 ny Talata alina tamin’ny 12 ora alina. Tsy navela naka sary ireo antotan-taratasy ireo instony ireo solontenan’ny K25 raha navela nanao izany tany am-boalohany. Manaporofo ireo tranga ireo fa efa hala-bato sy hosoka nomanina mialoha no nataon’ny governemanta sy ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena misahana ny fifidianana ary ny kandidà laharana faha-13, Rajoelina Andry.
Manana porofo ny momba ireo ny K25 ary nasehon’izy ireo tamin’ny haino aman-jery izany. Ny fitanana an-tsoratra “scanné” koa dia tsy azo antoka fa tena ilay fitanana an-tsoratra (PV) tena avy any amin’ny birao fandatsaham-bato tokoa ilay izy satria azo foronina izany ary “scanner-na” izany avy eo dia halefa. Tamin’ny fifanatrehana faharoa (débat face à face) ny Alahady 16 Desambra 2018, tao amin’ny TVM sy RNM, dia efa tsapa fa manaraka izay sitrapon-dRajoelina Andry fotsiny ity andrim-panjakana ity sy ireo ao amin’ny ORTM. Manaporofo izany ny nanovàna ny isan’ny olona nanotrona ireo kandidà roa lahy izay tokony ho 27 kanefa tsy neken-dRajoelina Andry io isa io dia dimy sisa no nahazo nanatrika izany. Raha ny marina koa dia tsy nanaja ny ora fanombohana ity kandidà ity ka tokony ho nofoanana iny adihevitra iny noho izany tsy fifanajàna izany, tsy eo amin’ny lafiny maha-olona fotsiny fa indrindra eo amin’ny lafiny hoe olona hitondra firenena no tsy manaja fotoana dia efa taratry ny tsy fahamatorana sahady izany. Ny olona tsy manaja ny zavatra nifanarahana ihany koa dia tsy azo itokisana, indrindra raha olona mihambo hitondra Firenena izany. Tsy iadian-kevitra ireo hosoka sy hala-bato ary ny fanodinkodinana ny safidim-bahoaka izay heverina fa tsy maintsy hamoahan’ny fitsarana sazy mifanandrify amin’izany.
Na izany na tsy izany dia tsy azo ekena ny namitahana ny vahoaka Malagasy tamin’ny nampifidianana azy tamin’ny biletà tokana tsy nisy laharana izay tsy ara-dalàna araka ny Lalàna Fehizoro (Loi Organique) laharana 2018/008 ny 11 Mey 2018, Andininy faha-120. Dradradraina anefa fa tany tan-dalàna i Madagasikara. Efa hita hatramin’izay fa betsaka ireo fanitsakitsahana ny lalàna velona, hatramin’ny Lalàmpanorenana mihitsy izany. Araka izany dia na ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC) hamoaka didy hanilihana tsotra izao (disqualification) ny kandidà Rajoelina Andry noho ireo porofo rehetra nanomanana ny hosoka isankarazany, na hanafoana ny fifidianana fihodinana faharoa, ka tsy ireo eo amin’ny fitondrana (governemanta, Ceni) efa niray tsikombakomba tamin’izao raharaha maloto izao no hanomana izay fifidianana hatao indray. Tsy fiarovana kandidà no hihetsehan’ny vahoaka Malagasy fa tsy fanekeny ny hosoka sy hala-bato ary famitahana azy nandrotsahany biletà tokana tsy misy laharana tamin’izao fifidianana izao koa anjaran’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana no mandinika sy mamakafaka ny tranga rehetra ka hamoaka didy mifandraika amin’izany. Raha dinihana dia sarotra ho azy ny hanintsana an-dRajoelina fa ny fanafoanana iny fifidianana iny no tokony hitranga, fifidianana tsy nilamina: olona 2 no maty, hosoka maro no hita: kara-pifidianana, karapanondrom-pirenena hosoka maro no nivoaka.
Mitodika eny Ambohidahy izany izao ny mason’ny rehetra, mba tena hitsara am-pahamarinana izy ireo fa tsy hitanila toy ny CENI, izay niaro tena fatratra ny alakamisy teo, hoy ny fomba fiteny vazaha izay hoe: “qui s’excuse, s’accuse”, izany hoe: matoa niaro tena fatratra ny CENI tamin’iny fotoana iny, dia tena meloka tokoa izy ireo…
Kianjan’ny 13 mey anio
Ho avy mavitrika koa ny avy any amin’ny faritra
Fotoan-dehibe ny eo amin’ny kianjan’ny 13 mey Analakely anio sabotsy, ho avy ao avokoa ny olona rehetra leo hosoka sy halabato amin’ny fifidianana, io dia tsy an’ny K25 na ny mpanohana ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomnana ihany, fa ho an’ny vahoaka Malagasy tsy ankanavaka mihitsy. Noho ity hetsika ity tolom-bahoaka ho fitakiana ny marina sy ho fiarovana ny safidy ; ho avy mavitrika ny avy any amin’ny faritra : tapakevitra ny vahoaka ; fantatra izao fa ho avy mavitrika ny avy any amin’ny faritr’i Vakinankaratra ; Itasy ; Bongolava ; Atsinanana manoloana ny tolom-bahoaka hanomboka anio sabotsy 29 desambra, raha toa ka vao manao ny fandaminana kosa ny avy any Alaotra Mangoro sy ny faritr hafa. Mety ho any an-toerana ihany ny vahoakan’Ambatondrazaka no hanao ny azy ; toy izany koa ny avy any Morondava faritra Menabe. Vonona hiaro ny fahamarinana sy hiaro ny safidiny ny vahoaka Malagasy.
Fifidianana lavitra ny mangarahara sy tsy ara-demokratika
Ny 19 Desambra 2018 lasa teo no notanterahina ny fihodinana faharoa tamin’ny fifidianana filoham-pirenena Malagasy. Maro ireo lesoka sy herisetra tsikarika nialoha, nandritra ary taorian’izany. Fifidianana izay azo lazaina fa lavitry ny mangarahara , tsy ara-demokratika ary tsy mitombina. Fifidianana nanjakan’ny kolikoly sy ny hosoka tanteraka. Manampy ireo ny firaisana tsikombakomba ataona kandidà iray amin’ireo mpiasam-panjakana ambony sasany nibaiko ny olona eo ambany fifehezany.
1 – Fampiasana ireo bileta tokana efa voamarika sy fanesefana mialoha ny vata fandrotsaham-bato.
2 – Fampiasana tsy an-drariny ireo kara-pifidianana tsy voazara, voatazon’ireo filoham-pokontany.
3 – Fandrafetana fitanana an-tsoratra diso
4 – Fandrebirebena saim-bahoaka
5 – Fampiasana herisetra
Noho ireo antony ireo dia hiaro ny safidim-bahoaka eo amin’ny kianjan’ny 13 mey Anakely anio ireo rehetra mitsipaka ny halabato sy ny hosoka tamin’ny fifidianana.
Fifidianana fiodinana faha 2
Nazava ny fitanilan’ny CENI
Na dia nanao fangatahana tamin’ny CENI aza ny K25 mba tsy ho havoaka aloha ny voka-pifidianana vonjy maika ny 27 desambra teo dia nikiribiby ihany ity birao mahaleo tena misahana ny fifidianana ity, namoaka voka-pifidianana, na mbola nanana 7 andro araka ny volazan’ny lalàna aza izy ireo nandinihana tsara ny taratasim-pifidianana, mba ho PV tena izy no ampiasaina fa tsy PV nalaina sary. Marobe ny halatra sy hosoka hita tao anatin’ny andro vitsy nahafahan’ny K25 nanao fampitahàna teny Alarobia . Izay no naha-may volo tratra ny CENI namoaka haingana ny vokatra tsy ofisialy sao tratra eo ny nafenina rehetra.
Raha ny fantatra dia ny ankabeazan’ireo mpikambana ao amin’ny CENI dia efa mpikambana tao amin’ny CENIT natsangan-dRajoelina Andry tamin’ny tetezamita raha tsy hilaza hafa-tsy ny filohany, Hery Rakotomanana fotsiny isika. Ireo no nikarakara ny resaka fitsapan-kevi-bahoaka tamin’ny taona 2011 nampandaniana ny lalampanorenana izay naha be resaka amin’izao fotoana izao, nandatsa-bato ny mpifidy tamin’izany na tamin’ny kara-pokontany aza. Tamin’izany dia nampiaiky an’izao tontolo izao ny fikarakaràna ny fifidianana satria kara-pokontany tokoa no nentina nifidy tamin’izany. Noho izany , mahazo tombony Hery Rakotomanana sy Thierry Rakotonarivo raha i Andry Rajoelina no ho lany filohampirenena , dia naleony ninia nikimpy teo anatrehan’ny fahamarinana nampandany ny mpangalatra sy ny mpanao hosoka, tena hita fa tena nitanila ny CENI, tena tsy nahaleotena mihitsy.
Ny fampanjakana ny MARINA ihany no hampandroso ity firenena ity
“Ny vato no mikodia mitady tany marina”, io no teny hanombohantsika ny resaka eto. Milaza fahendrena be dia be ao anaty soatoavina Malagasy izany. Iaraha-mahita ny zava-misy ankehitriny fa terena hiala amin’ny lalan’ny fahamarinana ity firenena ity ary ampidirina amin’ny fahalovana sy haratsiana faratampony. Mampibaribary izany ny fanambarana ny voka-pifidianana vonjimaika nataon’ny Ceni ny alakamisy 27 Desambra tolakandro lasa teo iny. Misy firaisana tsikombakomba ratsy ataona olom-bitsy manina ny “tongolon’i Egypta” tamin’ny taona 2009 nanjakan’ny gaboraraka sy fandrobana ny harem-pirenena eto amin’izao fotoana izao, ary ao anatin’izany, miray petsapetsa amin’izy ireo ny mpanao politika maloto frantsay rehetra. Na dia miafina fatratra ihany koa aza dia fantatra mazava fa misy dian-tanan’ny franc-maçon ao ambadik’izao filazana sy fikasana hampanjaka ny zava-tsy marina izao. Ezahina mihitsy aza ny hanitsakitsaka izay marina tokony hitoetra amin’izay eto amin’ny firenena, ka hanao izay tsy hivoahan’ny marina izay.
Tsy hahasoa velively ny vahoaka sy ny firenena Malagasy na haniry nify aza ny akoho, hoy ny fitenenana, ny fanosihosena sy fanitsakitsahana ny fahamarinana izany. Fanapotehana ny firenena tsotra izao izany, n’inona n’inona hambara. Ny fanambaran’ny Ceni teo dia tena fanehoana sy finiavana hanapempo sy hanasa ati-doha ny vahoaka hanaiky zava-tsy marina sy feno hosoka mbamin’ny kolikoly avo lenta. Fomba ratsy toy izany ve no tiana holovain’ny taranaka any aoriana any, dia hanao ahoana no hiheveran’ny any ivelany antsika Malagasy amin’izany? Efa manaiky sy niroso ho tompon’andraikitra amin’izany hatreto ireo mpikambana rehetra eo anivon’ny Ceni, ka tsy ho afa-bela ao anatin’ny tantaran’ny firenena.
Fa ny Malagasy vanona mandala ny fahamarinana sy mbola mitsinjo ny hahasoa ny taranaka fara aman-dimby dia tsy manaiky izany marindrano. “Ny vato no mikodia mitady tany marina”, ary tsy maintsy karohina ny marina. Izay ihany no hany lalana hahasoa ny firenena ankehitriny sy amin’ny ho avy manaraka rehetra. Matoa misy ny hetsika hotanterahin’ny mpiaro sy mpitaky ny MARINA tamin’iny fifidianana iny dia hetsika hahasoa ny firenena izany fa tsy hanakorontana velively akory.
Tadidio, fa tsy hahasambatra sy tsy hampiadana ny vahoaka velively ny tsy fampanjakana ny fahamarinana. “Ny firenena mandroso dia fatra-piaro ny marina, manaja ny fahamarinana”, hoy ilay Malagasy mpandinika mpanoratra iray tany amin’ny taona 1924. Ka raha mifanohitra amin’izany no tiana hampanjakaina eto dia mazava loatra fa tsy hisy fampandrosoana izany eto. Resaka adala fotsiny araka izany ny teny fisandratana voizin’ny laharana 13 izany satria iaraha-mahita sy miharihary izao ny zavatra efa nataony nialoha sy nandritra ny fifidianana. Ny marina anefa toy ny afo, raha fonosina mandoro”, ka milalao afo izay manakobona ny marina. Ny Ceni efa sahy milalao izay afo izay ankehitriny dia hiaraha-mahita eo ny fiafaràny.
Nizara fanomezana ho an’ny mpiasa noho ny fety
Ho fiarahana mifety amin’izao fetin’ny krismasy sy ny fetin’ny faran’ny taona, iandrasana ny taona vaovao 2019 izao, notoloran’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) fanomezana ny mpiasa rehetra manerana ny boriboritany miisa 6 eto an-drenivohitra sy ny ao amin’ny lapan’ny tanàna foibe. Vary sy menaka, ireo no natolotra azy ireo, ankoatry ny akoho sy ny “prime” horaisina ny alatsinainy ho avy izao. Tsy vao izao akory no efa nisy ny fizarana zavatra toy izao fa saika isan-taona dia misy foana izany.
Nanolotra ireo fanomezana ireo, nisolotena ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana, ny lefitra voalohan’ny ben’ny tanàna, Olivier Randrianarisoa, notronin’ireo mpiara-miasa aminy akaiky, eo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra. Tao amin’ny kianja Mitafo Mahamasina no nizarana izany omaly. Fa nandritra izao ihany koa no nanazavan’ny tale ara-bola ao anivon’ny CUA, Ny Riana Andriamasinoro, mahakasika ny fahataran’ny karama teo amin’ny mpiasa sasantsasany ao anivon’ny kaominina. Tsy ny mpiasa rehetra no tratra aoriana ny karamany hoy izy fa ampahany vitsy ihany.
Tsy tonga eo amin’ny toerana dia efa mitory mpanao gazety
Vao avy nampandresen’ny CENI ny kandida N°13 Andry Rajoelina ny 27 desambra lasa teo dia nandeha sahady ny fampihorohoroana maro samy hafa atao amin’ny olona tsy mitovy hevitra aminy. Nalaza i Andry Rajoelina tamin’izy filohan’ny tetezamita amin’ny fanagadràna mpanao gazety sy fanidiana onjampeo tsy mitovy hevitra taminy. Tratran’izany ny radio Mada , Free fm , radio Fahazavana sns…, ka mpanao gazety am-polony mahery no nigadra teny Antanimora vokatr’izany . Teo ihany koa ny nanaovana herisetra tamin’ny radio Fréquence Plus teny amin’ny foiben-toerany tao amin’ny 67 ha . Ankehitriny , vao tsy tonga eo amin’ny toerana maha filohampirenena azy i Andry Rajoelina dia efa mitory mpanao gazety ao amin’ny vondron-tserasera RLM Communication sahady .
Ny anton’ny fitoriana araka ny nambaran’ny namana ao amin’ny RLM comminucation dia ny lahatsoratra navoakan’izy ireo fa henjehin’ny fitondràna frantsay i Andry Rajoelina, mikasika ny tranobe tsy mazava ny vola nanamboarana azy any Frantsa . Tsy ity gazety ity ihany anefa no namoaka io vaovao io fa misy hafa ihany koa , iray tamin’izany ny TV5 Monde , ary tsy vao ny omaly ny omaly fa efa vaovao nandeha amam-bolana lasa izany. Koa mipetraka eto ny fanontaniana, efa manomboka sahady ve ny toetra efa nahazatra managadra olona sy mampitahotra na mbola tsy tonga eo amin’ny fahefàna aza ? ny mpanao gazetinareo manaratsy olona isan’andro ao amin’ny VIVA sy Free FM manala baraka olona isan’andro io , mety ve ny ataony ? tsy 2009 intsony izao Andriamatoa Andry Rajoelina a! ka moramora ihany.
TSY MADIO NY FIFIDIANANA ETO MADAGASIKARA
Tena adidy ny mifidy, tsisy hanohitra an`izany,
Saingy raha ny zava-misy , mahalasa saina ihany.
Maro mantsy ireo mandà ka tsy mandeha mifidy intsony
Noho ny ataon`ilay komity sy ireo mpitsara ambony !
Marobe ny fifidianana teto Madagasikara,
Saingy firy tamin`ireny no mba hoe nangarahara ?
Fa dia hosoka hatrany miampy fangalaram-bato
No henonao niverimberina sy nitranga tato ho ato .
Dia miteny ny komity , manamafy ny mpitsara
Fa sazian`ny lalàna sady ambara fa voarara
Izay rehetra hevi-dratsy mety hoentina mividy
Na hatao mba hanakanana ny safidin`ny mpifidy.
Saingy firy no efa re fa hoe nigadra na voatana
Vokatry ny hala-bato izay voararan`ny lalàna ?
Tena resaka manidina , tsy narahim-pampiharana,
Izany foana izao no misy ka mitohy ny fangalarana.
Koa dia aoka tsy ho gaga raha mihena ny mpifidy,
Sady mihamaro koa ireo tsy mety hanao adidy.
Ny antony dia tsotra ihany ry komity sy mpitsara:
Tsy madio ny fifidianana eto Madagasikara !
SEDERA RAVALISON (27-12-18)
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué CENI Madagascar, HCC Madagascar, Marc Ravalomanana, Ny Valosoa Vaovao. Ajoutez ce permalien à vos favoris.